उच्च-गुणवत्ता लि Links्कहरू र कम-गुणवत्ता लि Links्कहरू कसरी पहिचान गर्ने - Semalt विशेषज्ञ
एसईओ सफलताको लागि एक आधारभूत आवश्यकता उच्च-गुणवत्ता लि links्कहरू प्राप्त गर्ने क्षमता हो। के तपाइँ जताततै फेला पार्नुहुन्न कुन लिंकहरू उच्च गुणस्तरका हुन् र कुन बेवास्ता गर्न सकिन्छ भनेर कसरी पहिचान गर्ने भन्ने हो। पेशेवरको रूपमा, हामी लि quality्कहरूको पछिको गुणस्तर समय खर्च गर्दछौं। धेरैले यसलाई साइटलाई श्रेणीकरण दिन सबैभन्दा शक्तिशाली उपकरण मान्दछन्।
के हामी तपाईंलाई नबताउन सक्दछौं कि गुगलले सबै लि links्कहरू बराबर ठान्दैन। त्यसोभए हामीले लि links्कहरू खोज्नुपर्दैन तर क्वालिटी लि .्कहरू। समयको साथ, खोज इञ्जिनहरूले तिनीहरूको एल्गोरिदमहरू खाताको लागि विकसित गरियो र लिंकहरूलाई बिभिन्न तरीकाले वर्गीकृत गर्दछ। यस विकासले वेबपेजलाई विशिष्ट खोजी प्रश्नहरूको उत्तरहरू प्रदान गर्न कत्तिको उपयुक्त छ भनेर निर्धारण गर्न यसको प्रयोगलाई संकुचित गरेको छ।
यस पोष्टमा, हामी तपाईंलाई देखाउँदैछौं के उच्च गुणस्तरको लिंक वर्गीकरण गर्दा हामी कुन कारकहरू विचार गर्छौं। हामी कसरी देखाउने कि हामी यी लिंकहरू कसरी बनाउँदछौं।
कसरी खोजी ईन्जिनले लिंकहरू प्रयोग गर्दछ?
लि getting्कहरू प्राप्त गर्ने बारेमा सबै गडबडीको साथ, हामी यो महत्वपूर्ण जान्छौं कि खोजी ईन्जिनहरूमा यसको भूमिका बुझ्नु आवश्यक छ। जे भए पनि, ती उनीहरूलाई यत्तिको महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। वेबसाईटमा इशारा गर्ने लिंकहरू दुई प्रमुख कारणका लागि ईन्जिन खोज्न महत्त्वपूर्ण छन्।
त्यो वेबपृष्ठको अस्तित्व पत्ता लगाउन।
यसको बारेमा जानकारी निर्धारण गर्न।
यसको मद्दत दस्तावेजमा, Google वर्णन गर्दछ कि यसले पृष्ठ A देखि पृष्ठ B मा लिंक A लाई पृष्ठ A देखि पृष्ठ B मा विश्वासको मतको रूपमा व्याख्या गर्दछ। यी भोटहरू सामान्यतया बोल्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अझै, भोट हाल्ने पेजको महत्त्वले प्रदान गर्ने लिंकको मूल्यमा भारी तौल गर्दछ। अन्य महत्त्वपूर्ण पृष्ठहरू द्वारा लिंक गरिएका पृष्ठहरू महत्वपूर्ण मानिन्छन्।
बिंगले यसको कसरी गर्ने भन्ने गाईड र वेबमास्टर मद्दतमा वर्णन गर्दछ कि बिंग सर्च इन्जिनले लि organ्ग जैविक रूपमा हेर्न रुचाउँदछन्। जैविक लि By्कहरू द्वारा, तिनीहरूले मूल्यवान सामग्रीको परिणामको रूपमा प्राप्त लिंकहरूको प्रकारहरू सन्दर्भ गर्दछन्। यो खोज इञ्जिनको लागि महत्वपूर्ण संकेत हो किनभने यसले तपाईंको प्रमाणित गरिरहेको बोझ बचत गर्दछ यदि तपाईं आफू जे भए जस्तो दाबी गर्नुहुन्छ। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति जस्तै हो कि तपाईका मालिकहरूलाई सिफारिश पत्र लेख्छु। तपाईं तिनीहरूको प्रतिक्रिया कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
के ले लिंक मूल्यवान बनाउँछ?
यो स्पष्ट छ कि गुगलले भोट गर्नको लागि एक साइटमा गुणस्तर लिंकहरूको संख्यालाई विचार गर्दछ। राम्रो साइट लिinking्क, अधिक अंक लि gets्क हुन्छ। त्यसो भए लिंकको गुणस्तर निर्धारण गर्ने कारक के हुन्?
धेरै एसईओ उपकरणहरूले वेबसाइट र वेबपृष्ठहरूमा अधिकार ट्याग दिन प्रयास गर्दछ। त्यस्ता वेबसाइट वा वेब पृष्ठहरूबाट लि or्कहरूको गुणस्तर वा मूल्य पत्ता लगाउन उनीहरू त्यसो गर्छन्। तपाइँको वेबपृष्ठमा लि an्क गर्ने एक आधिकारिक वेबपृष्ठ हुनु भनेको अक्सर कडा स signal्केतको रूपमा काम गर्दछ, जुन आफै आधिकारिक स्रोत हो।
एक आधिकारिक साइट एक वेबसाइट हो जुन खोज इञ्जिनले निश्चित विषयको बारेमा जानकारीको सम्मानित स्रोत मानीन्छ। यो प्रतिष्ठा भनेको यसको अधिकार प्राप्त गरेको हो। गुगल, यसको मार्गमा, साइटहरूको प्रकृति अध्ययन गर्दछ जुन तपाईंको साइटलाई ब्याकलिks्क गर्दछ कुनै खास विषयको बारेमा यसको विशेषज्ञता र विश्वास योग्यता निर्धारण गर्न।
यहाँ एक उदाहरण छ:
मानौं एक वेबसाइट फार्मास्यूटिकल्स मा एक विशेषज्ञ मानिन्छ, तर यो फार्मास्यूटिकल उद्योग मा कम सम्मानित वेबसाइटहरु लाई लिंक छ। त्यो अवस्थामा, यसले देखाउँदछ कि प्रसिद्ध र प्रतिष्ठित साइटले तल्लोलाई त्यहाँको ट्राफिक पठाउनको लागि पर्याप्त ठान्छ।
यो खोज ईन्जिनको लागि राम्रो निष्पक्ष तरिका हो र तल्लो साइटलाई सूचकांक बनाउन। साथै, खोज इञ्जिनहरूले साइटको प्रतिष्ठा र विषयमा यसको अधिकार निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ।
जब लिंकको मूल्यको बारेमा कुरा गर्दै, धेरैले अधिकार प्रदान गर्ने त्यो निर्धारकको बहुमत श्रेय दिन्छ। यद्यपि अख्तियार सबै कुरा होइन। यहाँ चीज स्पष्ट गर्न को लागी एक उदाहरण हो। कल्पना गर्नुहोस् तपाईं एक देशमा छुट्टीमा गइरहनु भएको छ तपाईंले कहिल्यै भ्रमण गर्नुभएको छैन। के तपाईं त्यस होटलमा बस्नुहुने साथी वा शहरमा न बस्ने एक टुर गाईडले दिएको होटल सिफारिसहरूमा अझ बढी विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ?
यस देशमा बसोबास गर्ने साथी जमीनमा बुट बिना टूर गाईड भन्दा क्षेत्रका होटलहरूमा जानकारीको बढी सान्दर्भिक स्रोत हुन सक्छ। सामान्यतया बोलेमा हामी अनुमान लगाउन सक्छौं कि एक भ्रमण मार्गनिर्देशनले अधिक सान्दर्भिक जानकारी प्रदान गर्दछ, तर यो एक विदेशी क्षेत्र हो, त्यसैले यसको शब्दले पानी समात्दैन। कमसेकम जब त्यहाँ बस्ने तपाइँको साथी को तुलना संग।
त्यस्तै खोजी ईन्जिनहरूले तपाईंको वेबपृष्ठमा लिinking्क गर्ने उद्योगमा वेबसाईटको मूल्य बुझ्दछन्। माथिको उदाहरणमा, होटल्स समीक्षामा केन्द्रित वेबसाइटलाई सम्बन्धीत सम्बन्धीत स्रोतको रूपमा मानिन्छ कि स्थानीय समुदाय समूह जुन होटलमा बाहिर जान्छन्।
दुबै साइटहरूमा न्यु योर्कमा सब भन्दा राम्रो होटेलहरूको वर्णन गर्ने लेख हुन सक्छ, तर होटेल समीक्षा वेबसाइट न्यू ईर्कको सर्वश्रेष्ठ होटलको लागि उत्तम उत्तर निर्धारण गर्न खोज ईन्जिनलाई मद्दत गर्न अझ सान्दर्भिक हुनेछ।
तपाइँको वेबसाइट को लागी सब भन्दा राम्रो लिंक प्राप्त गर्दै
क्वालिटी लि links्कहरूको लागि खोजी गर्दा, हामी जहिले पनि अधिकार र प्रासंगिकताको साथ सम्मानित साइटहरूबाट प्राकृतिक लि build्कहरू निर्माण गर्न खोज्छौं। यी वास्तवमा लिंकहरूको सर्वश्रेष्ठ स्रोतहरू हुन्।
कम-गुणवत्ता लि links्कहरू फेशि। गर्दै
हामी प्रासंगिक लि links्कहरू दुबै साइटहरूसँग लि be्क गर्न मान्दछौं जुन अधिकार र प्रासंगिकता दुबै हो, यसले केवल यो बुझ्दछ कि कम गुणस्तरको लिंक यी सुविधाहरू बिना नै लिंक हुन्। कम-गुणवत्ता लि links्कहरू सामान्यतया प्राप्त गर्न धेरै सजिलो हुन्छ, र तिनीहरू प्राय: आत्म-निर्मित वा अनुरोध गरिएका हुन्छन्।
उदाहरण को लागी, केहि वेबसाइटहरु को लागी जो कोहीलाई लिंक सबमिट गर्न को लागी अनुमति दिन्छ र यी लिंकहरु अत्यधिक क्युरेट गरिएको सामग्री हुन सक्छ कि यसलाई एक अधिकार हुन उधारो। तथ्य यो हो कि यी साइटहरूले केवल कसैको लागि बिना कुनै विशिष्टता वा उद्योग वा आलाको साथ लिंक सबमिट गर्न अनुमति दिन्छ यसले अत्यन्त अप्रासंगिक बनाउँछ। त्यस्ता वेबसाइटहरूका लि low्कहरू कम क्वालिटीको हुनेछन्, र तिनीहरू सामान्यतया तिनीहरूसँग कुनै फाइदा लिदैनन्। उत्तममा, तपाइँ तपाइँको खोज मा शून्य प्रभाव को करीब अनुभव हुनेछ, तर ती पनि एक खतरनाक खतरा को रूप मा सेवा। गुगलको बोटले लिip्कलाई मेनिपुलेटिभ लि scheme्क योजनाको भागको रूपमा व्याख्या गर्न सक्दछ।
Google लाई उनीहरूलाई हेरफेरको लि consider्क ठान्ने कुरामा कडा मार्गदर्शन छ, र तपाईं यो सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईं यसको कानूनहरूको दाहिने पट्टि हुनुहुन्छ। Semaltनिस्सन्देह, यी कानूनहरूको साथ आफूलाई परिचित छ। अझै, यदि तपाईं लि links्कहरू आफैंमा उत्पादन गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफूलाई गुगल र बिंगको लिinking्क दिशानिर्देशहरूको साथ शुरुवातकर्ताहरूको साथ परिचित गर्नुपर्नेछ।
के तपाईं भुक्तान गरिएका लिंकहरू विचार गर्दै हुनुहुन्छ?
सब भन्दा पहिले चीजहरू, लिंकहरूको लागि तिर्ने काम अधिकांश खोज इञ्जिनहरूका मार्गनिर्देशनहरूको बिरूद्ध हो। सब भन्दा राम्रो मामला मा, यी लिंकहरु भुक्तान लिंक को रूप मा पहिचान गरीएको छैन, त्यसैले Google तपाईं को लागी दंड गर्न सक्नुहुन्न। अर्कोतर्फ, यदि गुगलले पत्ता लगायो कि तपाईंले वेबसाईटहरूबाट लि bought्क किन्नुभयो जुन लि sell्कहरू बेच्नका लागि परिचित छन्, उनीहरूले वेबपेजलाई लि links्क गर्न सक्छन् (जुन तपाईंको वेबपृष्ठ हो)।
त्यहाँ राम्रो कारणहरू छन् किन लिंकहरू नि: शुल्क वेबसाइटहरूमा राखिएको छ। वेब विशेषज्ञहरूको लागि यो ब्यानर विज्ञापन वा इन्टरनेटमा एफिलियट मार्केटि। प्रयोग गर्न सामान्य अभ्यास हो। त्यस्ता उदाहरणहरूमा, गुगलले सिफारिश गर्दछ कि वेबमास्टरहरूले यी लिंकहरूलाई स्पष्ट रूपमा फरक पार्नुहोस् rel="प्रायोजित" विशेषता प्रयोग गरेर प्रायोजित हुन। यसले गुगललाई सूचित गर्दछ कि लिंक त्यो हो जुन भुक्तान गरिएको छ र पृष्ठ रैंकिंग गणना गर्न प्रयोग गरिदैन।
यी प्रकारका लि acceptable्कहरू स्वीकार्य छन्, र तीनिहरूले तपाईंको पृष्ठ रैंकिंगलाई प्रभाव नपार्न सक्छन्, उनीहरूको मार्केटिंगमा उनीहरूको फाइदाहरू छन्।
तपाईलाई कुन फॉलो-लि know्कहरूको बारेमा थाहा हुनुपर्दछ
Rel="प्रायोजित" विशेषता पेश गर्नु अघि, गुगल र अन्य खोज इञ्जिनले rel="अनुसरण गर्दैन" विशेषता प्रयोग गर्‍यो। लि rel्कको लागि एचटीएमएलमा एक rel="अनुसरण नगर्नुहोस्" एट्रिब्युट राखेर खोजी इन्जिन बोट देखाउँदछ जुन लिंकको साइट वा वेबपृष्ठलाई सूचकांकन गर्दैन। प्रकाशकहरूले यो विशेषता खोजी ईन्जिनहरूलाई ती लिंकहरूमा पछ्याउनबाट रोक्नको लागि र तिनीहरूलाई कुनै पनि सुविधा प्रदान गर्न प्रयोग गर्‍यो। त्यसो भए पनि यदि उच्च श्रेणीकरण साइटले तपाइँको साइटलाई लिंक गर्दछ तर rel="no follow" विशेषता प्रयोग गर्दछ, यसले तपाइँको रैंकिंगमा प्रतिबिम्बित गर्दैन। गुगलले घोषणा गरेको छ कि यो विशेषता केवल सint्केत मात्र हो, र तिनीहरूले यसलाई बेवास्ता गर्न छनौट गर्न सक्दछन्।
सामान्यतया, कुनै पछ्याउने लिंकहरू एसईओ लि link्क निर्माण उद्देश्यका लागि प्रभावकारी हुँदैन किनकि लि equality्क समानता लि through्कबाट पार हुँदैन। जहाँसम्म, यदि व्यक्तिहरू तपाईंको लिंकमा क्लिक गर्न र तपाईंको पृष्ठमा आउँदछन् भने, म तर्क गर्छु कि यी लिंकहरू यति धेरै बेकार छैनन्।
एक विस्तृत र विविध लिंक प्रोफाईल भएको SEO को लागि महान हो। जब हामी जैविक तरिकाले हाम्रा ग्राहकहरूको साइटहरूमा लिंकहरूको संख्या बढाउन मार्गहरू खोज्छौं, हामी केवल गुणस्तरका लिंकहरू खोज्दछौं। सजिलो, असम्बन्धित, वा कम-गुणवत्ता लि links्कहरूको लागि जानु भनेको समय र संसाधनहरूको बर्बादी मात्र हो।
यसको सट्टामा, हामी तपाईंको वेबसाइटको लागि अद्भुत सामग्री सिर्जना गरेर १०० फोकस, उर्जा, र बजेट तिर्दछौं जसले आफैलाई लिंकहरू आकर्षित गर्दछ। हाम्रो समूह विज्ञहरूको सुनिश्चित गर्दछ कि हामीले प्रदान गर्ने सामग्री उच्च मापदण्डको हो, जसले तपाईंको साइटको प्रासंगिकता र अधिकार सुधार गर्दछ। अन्त्यमा, अन्य वेबसाइटहरूले यसलाई तपाइँको वेबसाइटमा लिंक गर्न फाइदाजनक पाउनेछन्।